Prusa i3 MK3, onye nbipute ọhụrụ si Josef Prusa | Akụrụngwa n'efu
Prusa i3 MK3, onye obibi ọhụrụ si Josef Prusa
Joaquin Garcia Cobo | | Nkọwa 3D
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D n'efu, n'ezie aha "Prusa" na-egosi, aha ejikọtara na onye okike ya, enweghị mgbagha. Josef Prusa, onye okike nke ụdị ngwa nbipute a, na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ngwa nbipute Prusa, na-ebupụta site n'oge ruo n'oge oge ụdị ihe nbipute ọhụrụ 3D.
Na nso nso Josef Prusa egosila ụdị Prusa i3 MK3, obere oge mgbe ebidochara Prusa i3 MK2s. Na agbanyeghi na enwere mpempe akwụkwọ dị otu ahụ, onye nrụpụta ọhụrụ nke Prusa na-ewepụta ihe mmepe dị mkpa nke doro anya na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ na-ebi akwụkwọ 3D ga-anakwere.
Prusa i3 MK3 enweghị teknụzụ ọhụụ ma ọ bụ nkwukọrịta ikuku ọhụụ, mana ọ na-agbanwe na ibipụta akụkụ, eme ka o kwe omume ichikota echiche. Ihe bara uru ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, anyị na-apụ na mpịakọta nke ihe ma ọ bụ ọ bụrụ na ebipụ ebipụta n'ihi ike ma ọ bụ mberede ndị ọzọ.
A na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ dị ọkụ, ihe na-eme ka o kwe omume ịgbanwe ihe ndina n'oge a na-ebi akwụkwọ ma ọ bụ karịa na mpempe akwụkwọ n'ihi na n'oge ibipụta anyị agaghị enwe ike ịgbanwe akwa dị ọkụ. Ihe omuma ohuru a nwere ngwaike nke na-enye ohere microstepping nke 256 nke na-eme onye nbipute ga-agbachi nkịtị n'oge a na-ebi akwụkwọ ma zie ezi karịa ụdị ndị gara aga.
Enwere ike idobe ngwa nbipute Prusa i3 MK3 na Joseflọ Ahịa Josef Prusa. Ndị na-eri nke nlereanya a dị ihe dị ka euro 749 ma gaa ire na abali novemba. Ọ bụ ezie na anyị ga-ekwupụta na onye nbipute Prusa i3 bụ usoro ihe nbipute 3D kachasị mfe enwere ike ịmegharị ya, ya mere, n'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịnwe ụdị mpempe akwụkwọ nke nwere otu ọrụ ahụ ma ọ bụ ọbụlagodi ndị ọzọ na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ ka mma. N'ọnọdụ ọ bụla, na Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Josef Prusa ị ga-achọta ozi ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Prusa i3 MK3, onye obibi ọhụrụ si Josef Prusa
Sọftụwia a ga - enye gị ohere ịmepụta ebe n’elu 3D gbagọrọ agbagọ
Hod Lipson na-egosi anyị ọgbọ ọhụụ ọhụụ ya enwere akụrụngwa maka rọbọt